Mpanamboatra sy mpamatsy afo Phosphate Flard - China Phosphate Flame Retardants Factory
Famaritana: Tricresyl Phosphate dia singa simika miaraka amin'ny tsiranoka molekiola CH21H21O4P (CH3C6H4O) 3PO. Ny Tricresyl Phosphate dia ranoka misy menaka mangarahara tsy misy loko na mavo. Tsy misy fofona, milamina ary tsy miovaova io. Izy io dia manana faharetana mirehitra plastika tsara, fanoherana solika, insulation elektrika ary fanodinana mora. Ny Tricresyl Phosphate dia tsy levona anaty rano ary mety levona amin'ny solvents organika toy ny benzene, alcohols, etera, menaka legioma, menaka mineraly. Ity ...
Famaritana: Triisobutyl phosphate dia singa simika misy formula molekiola C12H27O4P. Teboka mangotraka: ~ 205 c (lit.) Density: 0.965 g / ml amin'ny 20 c (lit.) Fanondroana miiba: n20 / D 1.420 Teboka: 150 ° C Tsindry etona: 0.0191mmHg amin'ny 25 ° C Fampiharana: Tri-isobutyl Phosphate ampiasaina ho mpanampy lamba, penetrant, dye auxiliaries, sns. Triisobutyl phosphate ampiasaina amin'ny defoaming agents sy penetrant. Ampiasaina amin'ny fanontana sy fandokoana, fanontam-pirinty, fananganana, solika fanampiny, sns ...
Famaritana: ny isopropylated Triphenyl Phosphate dia singa simika misy ny molekiola C27H33O4P. IPPP35 dia plastika tsy misy halogen phostate retardant ary tsy handoto ny tontolo iainana indroa. Amin'ity karazana phosfate ity dia an'ny IPPP35 amina karazana manana viscosity antonony sy afa-po phosforus. TheIsopropylated Triphenyl Phosphate dia tsy misy loko sy mangarahara, izay misy tsy fahaiza-manao tsara, ary mety ho marefo sy plastika izy io. Isopropylated Triphenyl Phosphate pla ...
Famaritana: Triaryl Phosphates Iospropylated dia ranon-javatra mahomby ary tokony hipetraka amin'ny toerana mangatsiaka sy maina ary misy rivotra. Ny Triaryl Phosphates Iospropylated dia tokony hotehirizina amin'ny toerana mangatsiaka sy maina ary misy rivotra. Milamina amin'ny mari-pana amin'ny efi-trano, hisorohana ny fipoahan'ny hazavana. Ny fanomezana fôsily triaryl phosphates isoprenylated consultation, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, amin'ireo mpanamboatra isoprenylated triaryl phosphates tsara indrindra any Shina, dia miandry anao hividy betsaka ...
Pharyphate Isopropylated Triaryl
Famaritana: Triaryl Isopropylated Phosphate, IPPP35 dia ranon-javatra mangarahara misy fofona manitra kely, viscosity 78-85 (20 ° C), teboka flash 220 ° C, teboka mangotraka 235-255 ° C (4 mmHg), index réfraktiva 1.553-1.556 ( 25 ° C), mety levona amin'ny benzène, toaka, kilasy etera. Izy io dia plastika mihazakazaka mirehitra miaraka amin'ny fahamendrehana hydrolytic tena tsara, menaka tsara ary insulation elektrika, fanoherana mitafy ambony ary fananana miady amin'ny bakteria. Ampiasaina indrindra amin'ny PVC, polyethylene, artifisialy hoditra, f ...
Famaritana: Ny molekiola molekiola C18H15O3P. Thriphenyl Phosphite dia tsy misy loko, mavo mavo ary ranon-menaka mangarahara ambonin'ny mari-pana ao an-trano. Tsy mety ritra anaty rano izy io ary misy fofona manitra. Izy io dia solontenan'ny antioksidanôly phosphore, mpitsabo chelating ary stabilizer amin'ny vokatra PVC, ary mpanelanelana manan-danja amin'ny fanomanana trialphyl phosphite. Triphenyl Phosphite dia antioksida mpanampy miaraka amin'ny fahombiazana tena tsara, plastika miaro amin'ny famonoana afo ary antioksida ...
Betsaka Tris (chloroethylmethyl) Phosphate
Famaritana: ranon-menaka mavo mavo maivana. Mamy kely. Izy io dia mety levona amin'ny solvents organika toy ny étanol, acétone, chloroform, carbon tetrachloride, sns ary mety levona anaty rano. Fampiharana: Ampiasaina matetika amin'ny famolahana ny flurantur polyurethane sy ny plastika amin'ny alàlan'ny flame PVC sns ... Ampiasaina betsaka amin'ny lamba fibre simika sy acetate cellulose ho toy ny flame retardant, afaka manatsara ny fanoherana ny rano, ny fanoherana mangatsiaka ary ny fananana antistatika ankoatry ny famonoana tena. Ny gener ...
Famaritana: ny phosfate Tris (2-chloroethyl) dia fantatra koa amin'ny hoe phichate trichloroethyl, phisphat tris (2-chloroethyl), nohafohezina ho TCEP, ary manana ny firafitry ny rafitra (Cl-CH2 – CH20) 3P = O ary ny lanjan'ny molekiola 285.31. Ny votoatin'ny klôria teôlôjia dia 37,3% ary ny votoatin'ny posiposy dia 10,8%. Ranon-diloilo misy menaka tsy misy loko na maivana miaraka amina endrika malefaka mamiratra ary 1.426 ny hakitroky azy. Ny haavon'ny hatsiaka dia 64 ° C. Ny teboka mangotraka dia 194 ~ C (1.33kPa). Ny index bias dia 1 ....